Ungayisebenzisa kanjani igumbi | Ota Ward Hall Aplico
Isicelo selothari yoncedo
<Ulumkiso> Amagumbi aphawulwe nge *, indlela yelotto itshintshiwe ukuthintela usulelo olutsha lwe-coronavirus.
Cofa apha ukuze ufumane iinkcukacha zendlela yeLotto
※Igumbi lokubonisa (elisetyenziselwa iintlanganiso)
※Iholo encinci / igumbi lomboniso (usetyenziso lomboniso)
Isitudiyo se-A / B
Indlela yeLottery Plaza yabemi beDaejeon Thatha inxaxheba kwilottery kwiholo elincinci.
* Indawo yelothari iya kuba yi-Ota Citizen's Plaza.
IOta Ward Hall Aplico, hayi indawo eyahlukileyoNceda uqaphele ukuba kuya kuba njalo.
* Ayinakusetyenziswa kwi-Uguisu Net IWarbler net
Indlela yexesha lesicelo Ukwamkelwa kwamkelwa kwiholo encinci yeOta Ward Plaza ukusuka nge-1: 20 emva kwemini ukuya kwi-2: XNUMX emva kwemini ngomhla welotto.
(Lottery iqala ngo-2: XNUMX emva kwemini) Ukwamkelwa kwamkelwa kwiholo encinci yeOta Ward Plaza ukusuka nge-9: 20 kusasa ukuya nge-10: XNUMX kusasa ngomhla welotto.
(Lottery iqala nge-10 kusasa) Ukusukela nge-4th ukuya esiphelweni senyanga, kwiinyanga ezine phambi kwenyanga yokusetyenziswa, faka isicelo kwi-Uguisu Net, kwi-Ota Ward Hall Aplico, okanye kwi-window ye-Ota Ward.
Umhla weLottery Usuku olunye unyaka omnye phambi kwenyanga yokusebenzisa
(NgoJanuwari kuphela ngowama-1) Usuku olu-6 kwiinyanga ezi-1 ngaphambi kwenyanga yokusebenzisa
(NgoJanuwari kuphela ngowama-1) Usuku olu-3 kwiinyanga ezi-1 ngaphambi kwenyanga yokusebenzisa
(NgoJanuwari kuphela ngowama-1)
Ixesha lokuqinisekisa Akukho Ukusukela ngosuku emva komhla we-lottery ukuya kwi-7 yenyanga enye, jonga iziphumo ze-lottery kwi-Uguisu Net.
(Iya kucinywa ngokuzenzekelayo emva kwexesha)
Isicelo sokusetyenziswa / umhla wokugqibela wokuhlawula Ukusukela kumhla we-lottery ukuya kwi-20 yenyanga enye
(Iya kucinywa ngokuzenzekelayo emva kwexesha) Ukusukela kusuku olusemva komhla we-lottery ukuya kwi-15 yenyanga enye
Indawo yokwamkela / indawo yolwamkelo IHolo yeWadi yeWadi iAplico
(Yonke imihla ngaphandle kweentsuku ezivaliweyo) Hall Iholo yeWadi yeOta iAplico
9:7 am to XNUMX:XNUMX pm (yonke imihla ngaphandle kweentsuku ezivaliweyo)
・ Indawo nganye ewadini: 9:7 am to XNUMX:XNUMX pm
Isicelo samancedo angenamntu
Ixesha lokufaka isicelo Ukususela kumhla emva komhla we-lottery ukuya kwiintsuku ezili-14 ngaphambi komhla wokusetyenziswa Ukususela kumhla emva komhla we-lottery ukuya kwiintsuku ezili-7 ngaphambi komhla wokusetyenziswa Ukusuka kwi-3th yenyanga ye-8 iinyanga ngaphambi kwenyanga yokusebenzisa ukuya kumhla wokusetyenziswa
Isicelo sokusetyenziswa / umhla wokugqibela wokuhlawula Nceda uhlawule ngexesha lokufaka isicelo. 1. Ukuba ufaka isicelo kwi-Intanethi, nceda uhlawule zingaphelanga iintsuku ezili-14 ukusukela kumhla wesicelo.
2. Ukuba ufake isicelo ekhawuntarini, nceda uhlawule ngexesha lokufaka isicelo. * Ukuba ufaka isicelo ukusukela kwiintsuku ezi-2 phambi komhla wokusetyenziswa komhla wokusetyenziswa, yi-Ota Ward Hall Aplico kuphela eya kubakho.
Uguisu Net isiteketiso senkqubo yekhompyuter esebenzisa amaziko oluntu kwiOta Ward.
Ngokubhalisa kwangethuba, uya kuba nakho ukufaka isicelo selotto kumaziko oluntu ngokuphendula ngezwi, ngefowuni, okanye nge-Intanethi, okanye ngokwenza ukubhukisha kwamaziko angenamntu.Ukongeza, kwanabo bangakhange babhalise bayakwazi ukubakho kwezixhobo ezivela kwiifowuni eziphendula ngelizwi, kwi-Intanethi, nakwiifeksi.
Ngolwazi malunga nendlela yokubhalisa kunye nendlela yokuyisebenzisa, jonga i "Uguisu Net Isikhokelo" okanye iphepha lasekhaya leUguisu Net.
Iphepha lasekhaya le-Uguisu Net
Ulwazi malunga neNkqubo yokuSetyenziswa kwamaZiko oLuntu yeOta (i-Uguisu Net) (iphepha lasekhaya leOta yeWadi)